Andraikitra ara-tsosialy - Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Orinasa sy mpiasa
Ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitra ijoroan'ny olona, ​​miaro ny zon'ny olona sy ny tombontsoany, manome trano sy alim-pandihizana maimaimpoana ho an'ny mpiasan'ny tsipika famokarana, mametraka boaty soso-kevitra ho an'ny mpiasa, mihaino ny feon'ny mpiasa ary miezaka mamorona sehatra ho an'ny fitomboan'ny orinasa sy ny mpiasa iraisana.
Orinasa, mpamatsy sy mpanjifa
Raha ny momba ny mpamatsy sy ny mpanjifa dia maharitra ny fiaraha-miasa amin'ny namana maharitra miaraka amin'ny orinasa mandritra ny vanim-potoana fanaovana tatitra. Manaraka ny foto-kevitry ny fahitsiana sy fahatokisana, ny orinasa dia mitady fampandrosoana miaraka amin'ireo mpamatsy sy mpanjifa, ary nohamafisina bebe kokoa ny fiaraha-miasa.
Orinasa sy fiarahamonina
Amin'ny maha-orinasam-panjakana tsy voasoratra anarana azy, ny orinasa dia mandinika tsara ny andraikiny ara-tsosialy amin'ny maha orinasam-panjakana tsy voatanisa eo am-piezahana hiverina amin'ny toekarena amin'ireo tompon-tany. Mba hampiharana lalina ny paikadim-pampandrosoana fanalefahana ny fahantrana amin'ny firenena dia nanao ezaka mavitrika ny orinasa hitana ny andraikitry ny orinasam-panjakana tsy voatanisa amin'ny fanompoana ny paikady fanalefahana ny fahantrana. Nandritra ny vanim-potoana nitaterana dia nampihatra drafitra fanalefahana fahantrana amin'ny fomba isan-karazany ny orinasa, ary tato ho ato dia nanolotra yuan an'aliny izy hanohanana ny fananganana faritra mahantra.